Nin soomaalida Iswiidhan ka mid ah oo u xuubsiibtay taageere kooxda Daacish | Somaliska
Sida uu maanta qoray wargeyska caanka ah ee Aftonbladet,ayaa shaaciyey in nin dhalinyarro ah oo ka mid ah soomaalida Iswiidhan ee mucwaanida arruurin jiray uu u xuub siibtay mid taageera kooxda Daacish ee ka dagaalama dalalka Suuriya iyo Ciraaq.
Ninkan oo da’diisa lugu sheegay 23, ayaa waxaa uu ka howlgalaa xarrun lugu hayo dadka soo galootiga ah oo ku taala duleedka magaaladda Stockholm ee caasimadda Iswiidhan. Wuxuu ku soo shaqeeyey tarjumaan, muddo dheerna wuxuu ahaa nin aad ugu fir fircoon faafinta dacwada Islaamka. Hase ahaatee taageero u hayo kooxda Daaicsh. Ninkan ayaa sidoo kale la sheegay in uu mid ka mid ah qololka lugu sheekeeysto ee chat-rum-ka loo yaqaano ee baraha bulshadda uu faafiyo daacayado taageero u ah kooxaha Alqaacida iyo Daacish.
“Walaalayaal waad aragtaan yaa caawinaya” ayuu ku yiri qoraal la soo dhigtay barta kooxdda uu ka tirsan yahay, halkaasoo gabar ka mid ah ay dooneeysay in lugu caawiyo sidii ay gabbdho kale ugu socdaali lahaaayeen goobaha jihaadka. Sidaana waxaa qortay Aftonbladet oo isha ku heeysay dhaq dhaqaaqa wiilkan soomaaliga ah.
Wargeysku waxaa kale oo uu qoray in ninkani adeegsado barnaamij loo yaqaano telegram, halkaaso isaga iyo kuwa taabacsan ku dhiiragelin jiray sida waxa ay ku sheegeen “waraabayaasha keligood ah iyo unugyadda yar yari ay u qorsheeyn lahaayeen una fulin lahaayeen weeraro aragagixso iyadoo aaneey dowladdu ogeyn”. Arrinta kale cajiibka ah ayaa ah in ninkaani ku dhiirageliyey asxaabtiisa ineey soo degsadsadaan lambar ka mid ah shabakadaha Alqaacida ee la yiraahdo Inspire, oo ay ku qoran yihiin qoraalo tixraac ah iyo qorsheyaal dilal iyo sameeynta bambka guryaha lugu sameeyo loo fulinayo.
Xarruumaha uu ka howlgalo ninkan ayaa, waxaa ku weheliya nin kale oo isagana jariidadu sheegtay inuu dhinacaas ku fir fircoon yahay. Barta telegram ayuu ku qoray isagoo dadka taabacsan ku wargelinaya ineey dhaqaalaha uu arruurinayo ka qeyb qaataan si dumar uu ku soo arkay xarrumaha qaxootiga loo siiyo xijaab ay saartaan. Bartan ee uu sida weyn u adeegsado ee telegram, ayuu sidoo kale ku soo qoray qoraal uu ku tilmaamayo culeeyska ay la eg tahay baahida loo qabo dhaqaale, taas uu hoosta ka xariiqay in “baahidaasi dhaqaale ee ay tahay mid ka weyn tan ciidan”.
Muddo haatan laga joogo wuxuu ninkani qeyb ka ahaa dhaqaalo loo arruurin jiray Soomaaliya. Wuxuu bishii luulyo ee ina dhaaftay diinwaan geliyey urur kaalmo arruuriya, kaas oo uu ku soo biyo shubtay mid isaga ku kooban. Ninkan ayaa sidoo kale wuxuu baraha bulshadda ee kala duwaniyo ee uu adeegsado ku wargeliyaa dadka ku xiran ineey ka qeyb qaataan kaalmadda uu aruuriyo. Wargeyska Aftonbladet oo kala rog rogaya amuurtana ayaa xusay in urrurkan 23 jiraan soomaaliga ah leeyahay soo dhigay sawiro iyo muuqaalo muujinaya meelaha ay gaarsiiyeen gar gaarka dadka ku tabaaleeysan Soomaaliya.
Wargeyska oo la xirriiray ninkan soomaaliga ah ayaa gebi ahaanba dafiray waxyaabaha lugu eedeynayo ee ah in uu taabacsan yahay kooxaha argagaxisadda ah. Wuxuu sheegay inuusan shaqo ku laheyn islamarkaasina aannu ka war qabin , balse sheegay in bartaasi telegram adeegsado.
Ugu dambeyntiina warka jariidadu maanta qortay ayey walaac badan ku abuurtay soomaalida Sweden, iyadoo qaarkoodna ay baraha bulshadda ku gorfeeyenayey raadka ay reebeeyso.
Qof loo qabtay masjid shiicadu laheyd oo toddoobaadkii hore la gubay